Laacibada Mohamed Salah iyo Sadio Mane ” Masii joogi doonaan Liverpool • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Laacibada Mohamed Salah iyo Sadio Mane ” Masii joogi doonaan Liverpool
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa Loo sheegay inay si degdeg ah ugu Dhaqaaqdo Weeraryahanka kooxda RB Leipzing ee Timo Werner oo ay ka dhigato Saxeexa ugu horreeya ee ay samaynayso xagaaga,
khaasatan haddii uu yimaaddo Shaki muujinaya Inay tegayaan Mohamed Salah ama Sadio Mane.
Timo Werner oo ah laacibka labaad ee Horyaalka waddanka Germany ee Bundesliga ugu Goolasha badan xili Ciyaareedkan.
Ayaa la sheegay in Liverpool ay Xiisaynayso, waxaana damaceeda sii dhiirigeliyey goolasha uu ka dhaliyey tartanka Champions League Waji ciyaareedkan oo ah Afar gool, iyadoo uu ahaa xiddigii sababta u Noqday in RB Leipzing ay ku tumato Tottenham ee Naadigiisa geeyey wareegga siddeed-dhamaadka.
Halyeygii Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa u sheegay Liverpoo, in aanay wax waqti ah iska luminin ee ay sida ugu dhakhsaha badan ugu Dhaqaaqdo Saxeexa xiddigan iyadoo ay da’diisu yar tahay sida xiddigaha khibradda badan u dheelaya.
Muuqaal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee Instagram, ayuu Ferdinand ku yidhi: “Werner waxaan daawaday kulankii Champions League ee Spurs oo aan si toos ah ula socday. ‘Wow, wiilkani waa wax kale’.
Laacibkan hore oo hadda ka mid ah khubarada faallaysa ciyaaraha, waxa uu sheegay inay u badan tahay in Salah uu ka tegayo Liverpool, sidoo kalena la iibin doono Mane, waxaanu yidhi: “Salah waxa laga yaabaa in aanu muddo dheer sii joogin. Sidoo kale, Mane ayaa laga yaabaa in la iibiyo, waxaana jira ciyaaro ku filan xili ciyaareedakn oo Werner ku riixi karaya inuu dhinacooda yimaaddo oo safka hore ugu soo bilowdo